2020 က သင့်အတွက်ဘယ်လိုလဲ? | Mycanvas
2020 က သင့်အတွက်ဘယ်လိုလဲ?
COVID-19 ကြောင့်ဒီနှစ်မှာလူအများစုကနေ့စဉ်ဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်။ အခုကတော့ ၂၀၂၀နှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်နှစ်မှတော့ သင့်အတွက်ရောလူတိုင်းအတွက်အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယခုနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး ရည်မှန်းချက်အသစ်ကိုချမှတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကိုပြီပြည့်စုံနိုင်ဖို့ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး နောက် ၃ရက်ထိ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့ ရည်မှန်းချက်အသစ်ချမှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Step 1 – Bullet List ပြုလုပ်ပါ
ဒီနှစ်အတွင်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုချရေးပါ။ ဥပမာ – အလုပ်အကြောင်း၊ သင့်ရဲ့ဝါသနာအကြောင်း၊ မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း စသဖြင့်ချရေးကြည့်ပါ။ အဲ့လိုချရေးခြင်းဖြင့် ဒီနှစ်အတွင်းသူတို့ဆီက ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့တယ်၊ အကောင်းအဆိုးတွေကို သင်ပြန်ပြီးတွေးတောကြည့်လို့ရပါတယ်။
Step2– ၂၀၁၉ ခုနှစ်နဲ့ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
၂၀၁၉ နဲ့ယှဉ်ရင် ဒီနှစ်မှာ သင်ဘာတွေဘယ်လိုတိုးတက်လာသလဲ?
သင့်ရဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ ပရောဂျက်တွေအဆင်ပြေပြေလုပ်နိုင်ခဲ့ရဲ့လား?
လူ့မှတ်ဉာဏ်ဟာမကြာခဏမရေမရာဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ ၂၀၂၀ ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်း၊ Blogs တွေနဲ့ Facebook Post များကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းထဲက ဓါတ်ပုံနဲ့ မှတ်စုတွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လည်းဒီနှစ်ထဲမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြန်မှတ်မိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ ဒီနေ့ List ကိုအခြေခံပြီး သင့်အတွက်တိုးတက်စေမယ့်အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။